Madaxweyne Farmaajo oo u Safray Dalka Masar - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Madaxweyne Farmaajo oo u Safray Dalka Masar
Madaxweyne Farmaajo oo u Safray Dalka Masar
April 22, 2019 admin293
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa u amba-baxay dalka Masar, halkaas oo uu ka furmi doono shir deg-deg ah oo ay yeelanayaan Madaxda Midowga Afrika.
Shirkan ayaa lagaga arrinsanayaa xaaladda dalka Suudaan iyo sidii xal waara looga gaari lahaa qalalaasaha siyaasadeed ee ka jira dalkaas.
Dowladda Federaalka Soomaaliya oo xusuusan hiilkii iyo garab istaaggii Dowladda iyo shacabka Suudaan ay u galeen walaalahooda Soomaaliya, xilliyadii adkaa, ayaa mudnaanta siinaysa ka qeyb qaadashada dadaallada heer gobol iyo heer qaaradeed ee ku aaddan samata bixinta dalka Suudaan.
Madaxweynaha ayaa shir doceedyo la yeelan doona Madaxda Afrika iyo masuuliyiinta dalka Suudaan ee ka qeyb galaya shirkan, isagoo la wadaagi doona mowqifka Dowladda iyo Shacabka Soomaaliyeed ee ku aaddan garab istaagga iyo taageeridda shacabka aan walaalaha nahay ee Suudaan.
Wasaaradda Maaliyadda oo Gaadiid ku wareejisay Maamul Goboleedyada
Xog laga helay Kulankii MD Farmaajo iyo Wafdigii Sacuudiga.
Madaxwaynaha Koofur-galbeed oo Mooshin Culus laga keenay
November 2, 2017 Cali Yare
Mas’uuliyiinta Ciidamada oo booqday degaanka Laanta buuro
June 13, 2017 Saadaq Laki
Guddoomiyaha Gobolka Meru ee Qaadka laga keeno oo sheegay in naftiisa ay halis ku jirto
Alshabaab oo Baardheere ku dilay Masuuliyiin Dowladeed.
Koox ka qaatayaal ah oo lagu xukumay xukunno kala duwan
Beesha Caalamka: Doorashada waa in Waqtigeeda lagu qabtaa
Maraykanka oo walaac ka muujiyay ciidamada dowlada ee gedo la geeyay
February 25, 2020 Duceysane 0